Avadiho ho lasa fidirana tsy misy tariby | Raspberry Pi anao Avy amin'ny Linux
Avadiho ho lasa fidirana tsy misy tariby ny Raspberry Pi anao
En lahatsoratra teo aloha miresaka momba ny DietPi rafitra iray ho an'ny Raspberry Pi anay izay ankoatry ny fananana vondrom-piarahamonina marobe dia manana rafitra sy tetik'asa samihafa.
Anisan'izany ny ahafahanao mamadika ny Raspberry Pi anao ho ivon-haino aman-jery, console lalao retro, mpizara NAS ankoatry ny zavatra hafa.
Amin'ity indray mitoraka ity dia ho hitantsika ny fomba fampiasana ny Raspberry Pi ho toy ny fidirana Wireless.
1 Mamadika Raspberry Pi ho lasa fidirana tsy misy tariby
1.3 Hamafiso ny fandrosoan'ny fifamoivoizana
1.4 Alefaso ny fifandraisana Internet
Mamadika Raspberry Pi ho lasa fidirana tsy misy tariby
Mba hahatratrarana izany, ilaina ny manana rafitra miasa amin'ny Raspberry antsika, noho izany ny rafitra ofisialy dia mety aminy.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny fanavaozana ny rafitray, satria ity amin'ny terminal dia hotendrenay ireto baiko manaraka ireto:
Raha vantany vao vita io dia handeha hamerina hanangana ny fitaovana misy antsika isika, mba hamonjy ireo fanovana rehetra atao.
Miverina ao amin'ny rafitra, andao hiroso amin'ny fametrahana hostapd, dnsmasq ary tetezana-tetezana, Ireto ireo programa roa izay hampiasainay hanovana ny Raspberry Pi ho lasa fidirana tsy misy tariby.
Noho izany, raha hametraka azy io dia sokafy fotsiny ny terminal ary eo no hanoratantsika ireto baiko manaraka ireto.
Vantany vao vita ny fametrahana ireo, dia hanitsy ny fisie fikirakiran'ireo programa izahay ka tsy maintsy ajanoninay miaraka aminy ny serivisin'izy ireo:
Manohy manitsy ity rakitra ity izahay izao:
Izao dia ao anaty rakitra io, ampio ireto andalana manaraka ireto amin'ny farany:
Eto amin'ity apetratsika ity, mihevitra izahay fa manana adiresy IP eo an-toeranaHo fanampin'izay, ny tambajotram-pifandraisanay dia manana anarana iraisana fa tsy misy hafa.
Aorian'izay, tsindrio Ctrl + O, avy eo Ctrl + X hamonjy ilay rakitra ary mivoaha amin'ny tonian-dahatsoratra.
Hampiasa dnsmasq ho mpizara DHCP izahay. Ny hevitry ny mpizara DHCP dia ny fizarana maodely ireo masontsivana fikirakirana tambajotra, toy ny adiresy IP, amin'ireo interface sy serivisy.
Andao hotadiavina anarana ny fisie rakitra default ary manoratra iray vaovao:
Ao amin'ny fisie vaovao no hanoratantsika ireto tsipika fandaminana ireto:
Ny tsipika ampiantsika dia midika fa hanome adiresy IP eo anelanelany izahay 192.168.0.11 sy 192.168.0.30 ho an'ny interface wlan0. Manidy sy mitahiry ilay rakitra izahay.
Y Ankehitriny isika dia hamorona fisie rakitra vaovao hafa, manao izany amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity izahay:
Ao anatiny no hametrahantsika ireto manaraka ireto:
Aiza no hanitsian'izy ireo ny andalana roa farany, satria eto no hametrahan'izy ireo ny anarana izay homeny ny toerana fidirana ary koa ny tenimiafiny, raha tsy misy ny ""
Vantany vao voahitsy isika dia hitahiry sy hanidy ny fanovana. Ary izao andao hosokafana ity rakitra manaraka ity:
Ao amin'ity fisie ity dia tadiavo ilay tsipika milaza hoe # DAEMON_CONF = ”” - esory io # ary apetraho amin'ny fitanisa ny làlana mankany amin'ny fisie config, ka dia toa izao:
Hamafiso ny fandrosoan'ny fifamoivoizana
Ny hevitra eto dia rehefa mifandray izy ireo dia alefa amin'ny alàlan'ny tariby Ethernet-ny fifamoivoizana. Noho izany dia tsy maintsy mandefa WLAN amin'ny alàlan'ny tariby Ethernet amin'ny modem anao izahay. Anisan'izany ny fanovana rakitra hafa:
Jereo izao andalana izao:
Ary esory ny "#", tahirizo ary manakaiky ny fisie.
Ny dingana manaraka dia ny manampy fitsipika iptables vaovao, avy eo miaraka amin'ny:
Alefaso ny fifandraisana Internet
Ankehitriny ny Raspberry Pi dia miasa ho toy ny fidirana izay ahafahan'ny fitaovana hafa mifandray. Na izany aza, mbola tsy afaka mampiasa Pi ireo hidirana amin'ny Internet ireo fitaovana ireo. Mba hanatanterahana izany dia mila manamboatra tetezana mandalo ny fifamoivoizana rehetra eo amin'ny interface wlan0 sy eth0 isika.
Vonona izahay hanampy tetezana vaovao (antsoina hoe br0):
Avy eo, hampifandraisinay amin'ny interface ny et0 ny interface:
Ary farany, andao hamboary ny rakitra interface ary ampio ireto andalana manaraka ireto amin'ny faran'ny fisie:
Averinay indray ny Raspberry Pi ary dia izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Avadiho ho lasa fidirana tsy misy tariby ny Raspberry Pi anao
SerjiuS dia hoy izy:
Mirary hariva ary misaotra amin'ny info.
Afaka tonga tamin'ilay teboka "Configure traffic forwarding" ny didy roa voalohany dia novonoina tsara fa ny "iptables-restore </etc/iptables.ipv4.nat" fahatelo dia tsy nanao.
Aorian'izany dia nanandrana nanohy aho ary tamin'ny teboka "Enable the Internet connection" rehefa vitako ny baiko "sudo brctl addif br0 eth0" dia lany ny tambajotra ao amin'ny rasperry, tariby na wifi
Nanohy ny ambin'ny fanamboarana teo an-toerana aho, fa aorian'ny famerenana dia mbola tsy manana tambajotra aho.
Azo amboarina ve sa averina?
Miarahaba ary misaotra betsaka mialoha.
Valio amin'i SerjiuS
DietPi, safidy tsara indrindra amin'ny Raspbian Lite ho an'ny Raspberry Pi anao